Criminology | ဟူသည် အဘယ်နည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
မာရီယာဟိုဆေး Roldan | 14/01/2022 12:19 | လေ့ကျင့်ရေး
အကယ်၍ သင်သည် လူသားတို့၏ အပြုအမူကို အမြဲစိတ်ဝင်စားနေပါက သို့မဟုတ် အချို့သော ရာဇ၀တ်မှုနှင့် တရားမဝင်သော လုပ်ရပ်များကို အဘယ်ကြောင့် ကျူးလွန်သနည်း၊ Criminology အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည် သင့်အတွက် စံပြတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ ဒီဘာသာရပ်က တကယ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး လက်တွေ့မှာ ဘာသာပြန်နိုင်တဲ့ ဗဟုသုတများစွာကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆောင်းပါးတွင် Crimonology အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် အကြောင်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြောပြပါမည်။ မတူညီသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများမှ
1 ပြစ်မှုဗေဒ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
2 ရာဇ၀တ်မှုပညာကို လေ့လာနေသူမှာ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ရှိသင့်လဲ။
3 ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ဘယ်လိုဝင်ရောက်ရမလဲ
4 Criminology အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
5 Criminology သည် စံပြအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဟုတ်မဟုတ် မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
Criminology သည် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့် ၎င်း၏ရာဇ၀တ်မှုများအား စေ့စေ့စပ်စပ်လေ့လာနိုင်စေမည့် စည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ထိုလူကို ထိုကဲ့သို့တရားမဝင်သောလုပ်ရပ်များကျူးလွန်စေရန် ဦးတည်စေသော အကြောင်းတရားများကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ရာဇ၀တ်မှုပညာသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော သော့ချက်၊ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရာဇ၀တ်မှုများကို လျှော့ချရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ အများဆုံးသော ပြည်သူ့စံနှုန်းများနှင့် တန်ဖိုးများအောက်တွင် နေထိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို၊ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသည် ရာဇ၀တ်မှုနှင့် ရောထွေးနေတတ်သည်။. လူတစ်ဦးစီတွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများရှိပြီး ရာဇဝတ်မှုပညာသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာနယ်ပယ်တွင် တာဝန်ခံနေသော်လည်း ရာဇ၀တ်မှုပညာသည် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးနယ်ပယ်ကို အာရုံစိုက်ထားသည်။ ရာဇဝတ်မှုဗေဒပညာသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ဝိဥာဉ်ကို အချိန်တိုင်းနားလည်ရန် ကြိုးစားပြီး ၎င်းသည် မည်သို့မည်ပုံ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ကြောင်းကို သိရှိရန် ကြိုးစားသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် သက်ရောက်မှုကိုလည်း လေ့လာသည်။
ရာဇ၀တ်မှုပညာကို လေ့လာနေသူမှာ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ရှိသင့်လဲ။
ပြစ်မှုဗေဒဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည် ဥပဒေတစ်ခုနှင့် လုံး၀သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့် ထိုကဲ့သို့သောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းကိုရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်သူသည် ကျင့်ဝတ်နှင့်တရားမျှတမှုကို အပြည့်အဝစိတ်ဝင်စားမှုရှိမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ထို့အပြင်၊ မေးခွန်းထုတ်ခံရသူသည် ဆက်စပ်ပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိရမည်ဖြစ်သောကြောင့် အချို့သော မသင့်လျော်သောအပြုအမူများကို နားလည်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူလာမည်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ကွဲပြားသော အကဲဖြတ်ချက်များကို မည်ကဲ့သို့ ကောက်ချက်ချရမည်ကို သိရှိခြင်း၊ ရာဇ၀တ်မှုဗေဒဘာသာရပ်ကို လေ့လာရန် ဆုံးဖြတ်သူတိုင်း ရှိသင့်သည့် အရည်အချင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို ဘယ်လိုဝင်ရောက်ရမလဲ
အကယ်၍လူတစ်ဦးသည်ဤတက္ကသိုလ်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါကဘွဲ့ဒီဂရီတစ်ခုရရန်သို့မဟုတ်၎င်းတွင်စာရင်းသွင်းရန်ပိုမိုမြင့်မားသော FP ဘွဲ့တစ်ခုရရန်လုံလောက်သည်။ ပြစ်မှုဗေဒဘွဲ့သည် လေးနှစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ရောဂါကုထုံး၊ သိပ္ပံနည်းကျ သို့မဟုတ် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တန်ဖိုးများကို လေ့လာသည်။
လက်ရှိတွင်၊ Criminology အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသူသည် ပြဿနာများစွာမရှိဘဲ အလုပ်တစ်ခုကို ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်စေပါသည်။ အများအားဖြင့်, ရာဇ၀တ်မှုဗေဒ ပညာရှင်များသည် များသောအားဖြင့် အကျဉ်းထောင်များကဲ့သို့သော တရားမျှတမှု သို့မဟုတ် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ၎င်းတို့တွင် အချို့သော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လေ့လာမှုအချို့ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းစသည့် အလုပ်အမျိုးမျိုးကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။
အခြားကိစ္စများတွင်၊ ၎င်းတို့သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် မတူညီသော ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် သားကောင်များကို ဝတ်ပြုရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သူတို့ကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အကူအညီတွေ ပေးတယ်။
Criminology သည် စံပြအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဟုတ်မဟုတ် မည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။
ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ရာဇ၀တ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အရာအားလုံးကို သင်နှစ်သက်ပါက ၎င်းသည် စံပြအလုပ်ဖြစ်နိုင်သည်။. သင့်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသည်၊ သင်သည် လူတစ်ဦးအား တရားမ၀င်လုပ်ရပ်တစ်ခုကျူးလွန်ရန် မည်သည့်အရာအား စုံစမ်းရန် စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ Criminology အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၏မျက်နှာသာပေးသည့်အချက်များထဲမှတစ်ခုသည်၎င်းတွင်အလွန်ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိသည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းကြောင့် ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် သားကောင်အများအပြားကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်သောကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အလွန်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့် စည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။ ရာဇ၀တ်မှုဗေဒ ပညာရှင်တစ်ဦးသည် ရာဇ၀တ်ကောင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို လေ့လာရန် တာဝန်ရှိသည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ရာဇ၀တ်ကောင်များကို လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းသို့ ပြန်လည်ထည့်သွင်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အမျိုးမျိုးသောလေ့လာမှုများကို ဖန်တီးရန်။
တိုတောင်းခုနှစ်, Criminology အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ မြင်ကွင်းကျယ်တစ်ခုလုံးတွင် စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။. လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ၎င်းတာဝန်ယူထားသော အခန်းကဏ္ဍသည် အလွန်အရေးကြီးပြီး ၎င်းသည် လူများစွာကို ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေသည်။ အထူးသဖြင့် အချို့သောတရားမ၀င်သော သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်သည့်အခါတွင် လူသား၏အပြုအမူကို အလွန်စိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက် စံပြစည်းကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » လေ့ကျင့်ရေး » Criminology ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဘာသာရပ် အသီးသီးကို လေ့လာရန် သင့်ကိုယ်သင် စည်းရုံးနည်း